प्रिमियर इन्स्योरेन्स : बीमाशुल्क १३.९०%ले घट्यो, नाफा ४४.०७%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासमा खुद बीमाशुल्क १३.९० प्रतिशतले घटेको छ। सोमबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार चौथो त्रैमासमा कम्पनीले खुद बीमाशुल्कबापत ६९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आर्जन ८० करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा...
नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा लाभांश प्रस्ताव, नगद र बोनस सेयर कति ?
काठमाण्डौ । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको गत साउन ३० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रस्तावित लाभांशमा हाल अद्यावधिक रुपमा कायम रहेको चुक्तापुँजी ३ अर्ब ८ करोड २६ लाख २६ हजार ५४८ रुपैयाँको कुल १७.५ प्रतिशत हुन आउने ५३ करोड ९४ लाख ५९ हजार ६४७ रुपैयाँबराबरको...
नेशनल लाइफद्वारा बिमाशुल्क आर्जनतर्फ १६.८४% को प्रगति, आम्दानी १२ अर्ब ९४ करोड
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमाससम्म नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडले ९ अर्ब ११ करोड खूद बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा कम्पनीले ७ अर्ब ८० करोड बिमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यसरी हेर्दा बिमा शुल्क आर्जनतर्फ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले १६.८४ प्रतिशतको प्रगति गरेको देखिएको छ । समीक्षा...
महालक्ष्मी लाइफको बिमाशुल्कमा २४५% को छलाङ, आम्दानी–खर्चको सन्तुलन
काठमाण्डौ । देशको कान्छो जीवन बिमा कम्पनी महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले बिमा शुल्क आर्जनतर्फ २४५.४५ प्रतिशतको छलाङ मारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमाससम्म यो कम्पनीको खूद बिमा शुल्क आर्जन ८६ करोड ८३ लाखको उचाईमा पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा २५ करोड १३ लाखमा सीमित थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ९४ करोड ८० लाख...
प्रभू लाइफद्वारा बिमाशुल्क आर्जनमा १५३% को छलाङ, अन्य सूचक कस्तो ?
काठमाण्डौ । प्रभू लाइफ इन्स्योरेन्स लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बिमा शुल्क आर्जनतर्फ १५२.७८ प्रतिशतको छलाङ मारेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म ४७ करोड ३८ लाखमा सीमित कुल बिमा शुल्क आर्जन बढेर यो वर्ष १ अर्ब १९ करोड ७८ लाखको उचाईमा पुगेको हो । कम्पनीले अघिल्लो वर्ष ३ करोड ८८ लाखमा सीमित लगानी, कर्जा तथा अन्यबाट हुने आय बढाएर ९...
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स : बीमाशुल्क आर्जनमा ८१.३४%को छलाङ, नाफा ५३.४०%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासमा खुद बीमाशुल्कबापत १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। चौथो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको खुद बीमाशुल्कबापतको आर्जन ८१.३४ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको हो। अघिल्लो वर्ष यस्तो आर्जन ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीको...
एनएलजी इन्स्योरेन्सको खुद बीमाशुल्क घट्यो, नाफा १५.३४%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासमा खुद बीमाशुल्कबापत ५९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। चौथो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको खुद बीमाशुल्कबापतको आर्जन २६.९४ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आर्जन ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीको...
एनएलजी इन्स्योरेन्सको लिलामी सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको लिलामी सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज बिहीबार अन्तिम मौका रहेको छ। कम्पनी गत चैत १२ गतेदेखि असार २५ गतेसम्म चुक्तापुँजीको १०ः६ को अनुपातमा प्रतिकित्ता रु. १०० अंकित ३८ लाख ४२ हजार ४३७.५० कित्ता हकप्रद बिक्री खुलाएको थियो। जसमा ३६ लाख ८१ हजार ३५९.५० कित्तामात्र बिक्री भएको थियो। कम्पनीले...
जनरल इन्स्योरेन्स : नाफा ३९.७७%ले बढ्यो, बीमाशुल्क आर्जन रु. २०.९६ करोड
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासमा बीमाशुल्कबापत २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। चौथो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बीमाशुल्कबापतको आर्जन कम्पनीले २७.३३ प्रतिशतले बढाएको हो। अघिल्लो वर्ष यस्तो आर्जन १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीको दाबीभुक्तानी...
सानिमा लाइफ: बिमाशुल्क ९८.४२% ले बढ्यो, व्यवस्थापन खर्चमा पनि वृद्धि, नाफा र रिजर्ब घट्यो
काठमाण्डौ । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमाससम्म ८२ करोड ९३ लाख बढी खूद बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यो भनेको अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा ९८.४२ प्रतिशतको बढोत्तरी हो । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको खूद बिमा शुल्क आर्जन ४१ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो । कम्पनीको बिमा शुल्क आर्जनसँगै व्यवस्थापन खर्च र...
एशियन लाइफको नाफामा ७८.४३% को छलाङ, व्यवस्थापन खर्च घट्यो, आम्दानी बढ्यो
काठमाण्डौ । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमाससम्ममा ४ अर्ब ५४ करोड बढी बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको खूद बिमा शुल्क आर्जन ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले समीक्षा अवधिमा नाफालाई बढाएर १८ करोड १८ लाखको उचाई चुमाएको छ । यो भनेको अघिल्लो आर्थिक...
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको रु. ६३ करोडको आईपीओ भदौ ४ बाट निष्कासन हुने
काठमाण्डौ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले रु. ६३ करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ आउँदो भदौ ४ गतेबाट बिक्री खुला गर्ने भएको छ। कम्पनीले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जारी पुँजीको ३० प्रतिशतले हुन आउने प्रतिकित्ता रु. १०० अंकित दरका ६३ लाख कित्ता आईपीओ बिक्री खुला गर्न लागेको हो। कुल कित्तामध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख १५ हजार कित्ता सेयर...